8 Best Mimhanzi Mapurogiramu evana
Vabereki vanofanirwa kuona kusika nzira dzekuchengeta vana ruzivo uye kuvaraidzwa panguva imwe chete. Asi kune chero mubereki, zvinogona kuwana zvishoma zvinokanganisa, kunyanya kana uchifanira kushanda uchibva pamba, nekuda kwemabasa ese epamba, kudzidzisa, uye mamwe mabasa akapoteredza imba.
Mumhanzi imwe yedzakanakisa nzira dzaungaite kuti vana vako vafarire, uye uzvizvitengere wega kana maviri kuti uwane imwe nguva iwe pachako. Haasi mimhanzi yose yakanaka kune vana kunyange, ndosaka tichiisa pamwechete runyorwa rwemhando yepamusoro yemimhanzi mimhanzi yevana inoitirwa vana uye inopa varaidzo yakanaka.
Mussila Music Chikoro (Android & iOS)
App iyi yakagadzirirwa vana vane makore mashanu kana anodarika. Inopa anodarika makumi maviri emimhanzi kosi uye pamusoro pemhanzi zviuru zvinomwe zvemimhanzi, ichiita nzira inonakidza yekuti vana vadzidze mimhanzi kuburikidza nemitambo, inonakidza kurovedzera uye yekirasi mimhanzi makosi.
Kudzidzira kushandirana uku kunokurudzira vana kuti vapfuure mukosi yega yega, kuvadzidzisa pakati pezvimwe zvinhu nzira yekuridza nenyere, uye kudzidza nezvevaridzi venziyo vakaita saBeethoven, Bach, neMozart. Makadhi edzidziso akarongedzwa nezvokwadi nezvemimhanzi uye mimhanzi mitambo inosanganisirwa inodzidzisa vana zvinhu zvinonakidza, uye chinhu che DJ kwavari kuti vaite mimhanzi yavo.
Sesame Street Inoita Mimhanzi (iOS)
Sesame Street ndiyo yekare yehudiki yaunofarira, uye iyi yazvino app inoratidzira furry nyeredzi senge Cookie Monster, Elmo, Abby, Ernie, nevamwe vazhinji. Vana vanonakidzwa neavo mavara avanofarira kuimba nekutamba kune nziyo dzinozivikanwa sekuti "Mary akange aine gwayana" kana "Mavhiri mubhazi" mune akasiyana masita samba, dombo, nezvimwe zvakawanda.
Pane zvigadzirwa gumi zvinoshandiswa nevanhu zvinoridzwa kutamba, uye vana vako vanobva vatamba pamwe chete nevatambi vacho vachitsvaga mitinhimira yavo voga nekutamba ne tempo. Ivo vachazodzidzawo nezvekutamba nguva yemimhanzi pavanenge vachiridza zviridzwa chaizvo kuti vajaire nhetembo dzevaridzi vane vavanofarira eSesame mavara.
Spotify Kune Vana (Android & iOS)
Mimhanzi app inozivikanwa Spotify, akavaka iyi nyowani-yega mimhanzi yekuteerera app yevana chete. Inotarisira izvo zvakasarudzika zvido zvevadiki zvakarongedzwa nenziyo dzinopfuura zviuru zvisere, zvirahwe, uye nyaya. Vana vako vanowana kunakidzwa zvemwana zvinoshamwaridzana izvo zvese zvinodzidzisa uye kuvaraidza, nepo vabereki vachiwana rugare rwepfungwa.
Iyo app inosanganisirwa nekunyoreswa kweSpotify Premium Family kunyangwe, asi izvi zvinorehwa kuti vave nechokwadi chekuti vanofarira zvirimo kubva munzvimbo yakachengetedzwa.
Izvo hazvina-ad, zvinowirirana ne Kurera kwevana paInternet Kudzivirirwa (COPPA) inotonga, inoteerera-yakakwenenzverwa uye yevanhu-yakadzivirirwa kunge yakakodzera vana. Dzidza zvakawanda nezve mimhanzi app yevana mune yedu Spotify Kune Vana mutungamiri.
Loopimal inopa kusingaperi mikana yekuti vana vadzidze kugadzira mimhanzi. Iko hakuna chinangwa, chakashata kana kurudyi system kuitira kuti vana vako vagadzire mimhanzi yakawanda sezvavanenge vachida kushandisa iwo manzwi uye ehupenyu mune yekiti yekuvaka. Izvi zvishandiso zvakagadzirwa nemaoko zvinopa nzira inonakidza yevana kuti vapinde munyika yekutenderera kwemakomputa, mimhanzi kuumbwa uye kufamba.
Pre-schoolers vanogona kunakidzwa neiyo app nekudhonza uye nekudonhedza zvimiro kune mutsara wenguva uye kuita kuti mhuka dziite mutsindo nekutamba.
Mazaam Musical Genius (Android & iOS)
Kuvimba nekuchangobva kuitika kwesainzi mune yakanaka psychology uye neuroscience, Mazaam inopa intuitive nzira yekubatsira mwana wako kusiyanisa uye kuziva mimhanzi zvinhu achiri kusekerera.
Kubva pakupa makondo anofara uye kutsveta mazino e chameleon, kuisa squirrels pamubhedha, chishandiso chinogonesa mwana wako kushanyira nyika dzinotamba apo achitsvaga mhando dzemimhanzi yepamusoro.
Iyo duo mode chinhu chinokubvumira kuti ubatane mukunakidzwa nemwana wako uye tarisa pamamiririri emwana wako kuburikidza neshumo rakapihwa panopera kosi yega yega.
Mucheche Mozart (iOS)
Iyi mimhanzi app yevana yakagadzirirwa vacheche, vacheche, uye vana vadiki. Izvo zvakanakira nguva idzo kana mwana wako akagwinha, asina simba, kana akamuka pakati peusiku achichema. Iyo-in-one app ine zvinhu zvinobatsira kuti vana varere kurara uye zvinobatsira kuvandudza pfungwa yavo pavanenge vachiteerera mimhanzi.
A ruzha chena chimiro chinowanikwa, chakavimbiswa kudzikamisa mwana wako kuti arare pamwe nemimhanzi ye classical iyo inosimudzira uropi hwemwana wako kubva pazera diki. Izvo zvinyoro-nyoro, zvinonzwika zvinonzwika, nziyo dzevana uye makadhi emagetsi zvakare anobatsira mwana wako kudzidza maABC avo, uye ivo vanogona kukura nazvo pavanenge vachikura.
Kidloland inogadzirwa nevanotamba mupfungwa. Yakazara neyakarerekera kirisimasi nziyo uye zvimwe zvimwe zvinokatyamadza sengemhanza popping zviitiko, uye zviuru zvimwe zvinouya zviri zvipenyu kuburikidza nepeipi pachiratidziri chako.
Chikamu chemifananidzo chinosanganisirwa icho chinobatsira vana vako kutora matanho avo ekutanga pakudzidza kuverenga. Hazvishamisi kuti Kidloland inouya yakakurudzirwa zvikuru nanamai, vanababa, uye vadzidzisi seyakazara app yekuchikoro chechikoro chepuraimari uye nekudzidza zvakanaka.
SaSotify, YouTube inewo mimhanzi app yakanangana neyevana. YouTube Vana inopa nharaunda inoshamwaridzana yemhuri iyo inobvumira vana kuwana ruzivo kubva kumativi ese epasi. Kubva pamimhanzi kusvika kuzvirongwa zvedzidzo uye mifananidzo, vana vanobva vafamba uye kuwana zvitsva uye zvinonakidza misoro yekufarira.
Vana vanonyatsoda mimhanzi. Hazvisi chete izvo zvinovabatsira kutamba kure kwavo kwakaipa mhemo, kana kuvanyaradza kurara husiku, asi zvinovabetserawo kuratidza yavo yemukati yekutamba mambokadzi uye pop nyeredzi. Kana iwe usina zano rekuita sei kuchengetedza vana vako vakabatikana uye kunakidzwa, edza chero eaya anoshamisa aya mimhanzi maappu evana.
Iwe unogona zvakare kutarisa gwara redu pane zvakanakisa zvinonetesa kutenga vana vako kana vachida zvemitambo kana mawebhusayithi ane mabhuku epamhepo emahara evana kuverenga.
Pane here mimhanzi app yevana inonyatsodiwa nemwana wako? Goveranaiwo nesu nekudonhedza mhinduro dzenyu muchikamu chiri pazasi.
Maitiro ekutenderera Apple Music paFire TV Stick
4 Zvakanakisa Kunyorera Zvirongwa zveVana